Qalabka Daloolinta Soosaarayaasha, Alaab-qeybiyeyaal - Shiinaha Wershadaha Qalabka Daloolinta
12 kumbiyuutar Qalabka Qalabka Daloolinta Qalabka ee Soodhawrka Sanka Sanka Xuddunta
12pcs Qalabka qalabka daloolka macmalka ah Magaca: 12 kumbiyuutarada Daloolida koorta dahabka ah Qiyaasta: 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.4 / 3.2 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0mm Isticmaalka: Tattoo & Qalabka Wax Lagu Dilayo 12 koonto galinta birta 1.6 ilaa 11mm. Koodhadhka galinta waa balaadhiyeyaal (ama spacers) oo ku caajisay salka si ay u awoodaan inay ku riixaan dahabka aad rabto inaad gasho sida giraan tusaale ahaan. Qalabkan koorta ah ee lagu xidho waxaa ka mid ah cabirka soo socda (kala duwanaanta +/- 0.1mm): 1.6mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.6mm, 5mm, 6mm, 7mm ...
8 kumbiyuutarada Xirfadlayaasha Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka jirka
Qalliinka Qalabka Caloosha Qalliinka Qalabka Dhegaha Carrabka Septum Oo Kale Qalabka Dibnaha Tweezers Hareyaasha Xidhmooyinka Isku Xidhidda Qalabka Qalabka 8pcs Jidhka Daloolka Forceps Kit 8pcs daloolin xirmooyinka Isticmaal: Qalabka Daloolinta Qalabka: Ahama ahama, Caag, Lafaha (Gacan) Midabka: Midabbada kala duwan ayaa gacanta ku haya Xidhmada: Maqaarka sanduuqa 8PC QALABKA NOLOL XIRFADDA XIRFADDA W / CASE EE LAGU SAMEEYAY XADHADA XADGUDUBKA OO LA MID AH SAWIR LOO QAADAY QIIMEYN IYO QIIMO LACAG LACAG AH Qeexitaannada: Xirmada qalabka wax lagu mudayo ee meydka oo xirfad leh, samee jidhkaaga ...
1pc Tattoo Bead Ball Grabber 4 Claw ahama Steel Gem Holder Hay Body Dusha Qalabka
Tattoo Bead Ball 4 Claw Grabber Stainless Steel Grabbing Tool for Body Piercing Ball Removal Inser Insert Description Sharaxaadda tusbaxayaasha heysta ayaa si gaar ah loogu talagalay tattoo kuusha, kubbadaha qabashada iyo waxyaabaha kale ee samll haysta. Bir daxal lahayn iyo miisaan fudud, waara oo si fudud loo qaadi karo. Astaamaha: Waxyaabaha birta ka samaysan ee birta ah, sii waara. Naqshadeynta naqshadeynta ka hortagga taraafikada, oo raaxo leh in la qabto. Waxaa loogu talagalay qabsashada kuullada iyo kubbadaha. Ku habboon haysashada dheeman ama dhagax yar. Calaf ...
Ahama steel dushiisa Hemostat Forceps & guntin
Waxyaabaha: 316L ahama birta oo dhan Isticmaal 316L Medeical ahama, waxaad u adeegsan kartaa si aamin ah.Waa Caawiye Wanaagsan ee Loogu Talo Galo Daloolintaada 100% Nooc cusub oo tayo sare leh. Xirfadle la tuuri karo iyo xasaasiyad ka hortag. Birta aan qalliinka lahayn. Ku habboon oo aan infakshan lahayn Xidhmada 1 kumbuyuutar ee Daloolinta Qalabka Dhismaha Xooggan: Xidhmooyinka Daloolinta Jirka waxaa lagu beddeli karaa heerkulka sare. Xirmooyinka ayaa laga sameeyay qalab tayo sare leh, dhismo adag iyo adkeysi. Xirmooyinka ayaa si taxaddar leh loogu farsameeyay ...
Cirbadaha Mashiinka Mashiinka Kateetarka Qalabka
1) Aad u Sharf & Fudud Oo Fudud 2) Waxaa lagu damaanad qaadayaa qeexitaannada ISO 9001 iyo shahaadada Yurub CE 0197, Shakhsi buuran oo horay loogu sii daayay gaaska EO, 3) Waxaa nadiifiyay shirkadda Ethylene Oxide. Aan sun ahayn oo aan-pyrogenic ahayn. Burburi ka dib isticmaalka keliya. 4) 50pcs xirmo kasta. Nooca Badeecada: Tattoo Tatoo jirka Ka digaya Cirbadda Waxyaabaha Qalabka: 316 Nadiifinta caafimaad ee ahama ahaanta Xajmiga: 14G, 16G, 18G, 20G Midabka: Xirxirida Midabada leh: 50pcs / sanduuq Waa maxay qeexitaanka MOLONG Cirbadaha Mashiinka Tattoo? M ...
100PCS / Sanduuqa Kali Kali Shakhsiyaad Madaxbanaan Loogu Xidhay Cirbadda Tattoo-ga jirka lagu durayo Cirbadda Cirbada
Cirbadda Cirridka Cirridka Cirridka, Cirbadda Xirmooyinka Mashiinka Mashiinka Qalliinka ah ee Qalliinka Qalliinka Qalliinka Jirka ah ee Cirridka Cirbadaha Iskudhafan ee Cabirka 20G = 0.8mm, 18G = 1.0mm, 16G = 1.2mm, 14G = 1.6mm, 13G = 1.8mm, 12G = 2.0mm. Cabbirka: 20G 18G 16G 14G 13G 12G Korso 316 bir caafimaad, amaan badan oo caafimaad leh, xirxirid la tuuri karo, oo lagu nadiifiyey EO Gas xirxirida: 100PCS / sanduuqa Nooca Waxsoosaarka: Cirbadda daloolinta Tattoo Waxyaabaha: 316 Nadiifinta birta ee aan nadiifka ahayn Xajmiga: 12G, 13G, 14G , 16G, 18G, 20G Midabka: Length Silver: 50mm Specificat ...
Ahama ahama ahama birta la tuuro ee Cirbadaha Cirbadaha
Cirbadda la daadin karo ee la tuuro / irbadda daloollan Isticmaalka alaabta: Waxaa loo isticmaali karaa dalool iyo dalool sanka jirka, giraanta naaska, giraanta xudunta, daloolka dhegta, iwm. Baakadaha alaabada: fayadhowrka bey'adda u habboon ee bay'adda ku xiran ee astaamaha Waxsoosaarka: Mid kasta oo ka mid ah ayaa si shaqsi ah loo baakadeeyey, badbaado iyo nadaafad leh, cirbadda cirbadkeedu aad buu u fiiqan yahay, shaqaduna waa jilicsan tahay, dhalaalka ayaa wanaagsan, qeexitaannadiisuna waa dhameystiran yihiin! Dhamaan cirbadaha waxaa horay loogu sii qalajiyay gaaska EO. (ethylene oxide) Magaca: ...
5PCS & 3PCS Duugista Forceps Qalabka Tatooga Mashiinka
Xirfadlaha Qalabka Daloolinta Qalabka Xuddunta Qalabka Xuddunta Qalabka Qalabka - Qalabka Cirbadaha Cirbadaha Magaca waxsoosaarka: Qaniinyada Forceps Tattoo Qalabka wax lagu mudayo: Daloolinta & Tattoo Waxyaabaha: Diyaaradda Aluminium Alloy CC-008 5PCS Xidhitaanka Forceps Tattoo Daloolinta Qalabka xirmooyinka oo ay ku jiraan 1 giraanta xiridda xirmada 1 giraanta furitaanka daloolka 1 dabaysha dabka 1 septum forcep 1 slotted pennington forcep 1 kiiska daawaha 1 waxbarista VCD qaar ka mid ah daloolida jajabka irbadaha cirbadaha qaar CC-009 3PCS Piercing Forceps Tattoo Piercing Ki ...